Response to Dr Arjun Narsingh KC – RADHA PAUDEL
Response to Dr Arjun Narsingh KC
केसी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद हुन् भन्दैमा उहाको कुरा के मैले पताउनु पर्छ वा सहमत् हुनु पर्छ र ? अह म सहमत् भईन । हुन त उहाका समर्थकलाई चित्त दु:खदो हो ।
जागरन्को जुक्ती चहिएको छ भनेको के हो ? कस्तो जुक्ती हो, एक एक गरेर भनी दिएको भये हुन्थ्यो नि ? आज कर्णालीमा के स्वास्थ्य, शिक्षा, नभएकै हो त ? अहिले गाउ गाउमा स्कुल छन, हेल्पोस्ट छन, गबिस भाबना र सचिब छन कागजभरी, कागजभरी । सरकारी र गैर सरकारी निकएका सबै कार्यक्रम भएकै भयै छन, सदर्मुकाममा बिकासेहरुका कुहिना ठोकिन्छन, होटेल तानातन हुन्छन । गैर सरकारीमा काम गर्ने सबैको घर काठमाडौंमा छोरा छोरी बिदेश्मा कर्णालीका गरीब मान्छे जहाका तेही मात्र हैन धनी भएका धनी भएकै भ्एछन गरीबहरु ढुङे युगमा नै छन ।
पातिको सदस्य भएसी जागिर घरमा बसेर खान पाईन्छ . आफ्नो मान्छे भएसी जागिर पाईन्छ, कर्णाली गएसी प्रोमोसन नि हुनी, पैसो नि पाउनी, बिकास कसलाई , किन गर्नु पर्‍यो। बiहिर भित्र सबैलाई मिलेकै छ नि तारतम्य ।
कर्णालीलाई चहिएको उद्दोग हो, आज जुम्लाका स्याउ गाई भैंसीले खान्छन डोल्पा र हुम्ला जसलाई मोटर बाटोले छोएको त छैन तिन्का के कुरा गर्ने। कर्णालीलाई चहिएको रोज्गार हो जहाँ पुर्बी नेपालका दाजु भाई, दिदी बहिनी जान सक्ने प्रनाली चाहियेको छ नकी कर्णाली रोजगरी जस्तो फोहोरी राजनीति गर्ने, झन गरीब बनाउने परियोजान । कर्नलिमा भएका अधिकास बिकास जस्को नममा भएनी पर्निर्भरमुखी (dependency) छ, सबैलाई थाहा छ फेरी नथहापाये झै गर्छन्।
कर्णालीमा प्रबिधी चाहियेको छ, कर्णालीमा पर्यतन बिकास चाहियेको छ। जुम्ला नै जान मात्र एउटा बिदेशिले ७०० डलर तिर्नु पर्छ अरु जिल्लाको के कुरा?
म राजनीतिको भित्री फोहोरी खेल जान्दिन र जान्न कोशीस नि गर्दिन किन कि म आफुलाई दाट्न सक्दिन।
कर्णाली लाई छुटै पर्देश भन्दा नि बिशेष अधिकार दिनु पर्दछ जहाँ कर्णाली ले अबको २० बर्षमा फद्को मIर्न सकोस । दुई दिन घुम्न जाने, भत्ता खाएर जाने, लाई त कर्णाली स्वर्ग नै होला सधैं बस्नु पर्ने को लागि कर्णाली नर्क भन्दा बडी हो । जल्बायु परिवर्तनले हिउ सजिलै पग्लदो रहेछ तर कर्णालीको बिबशता, मानब निर्मित गरीबी पग्लन ललिपप भाषानले सक्दैन, ठुला ठुला सोध पत्रले सक्दैनन, मान्छे मारेर त नसकिने प्रमाणित भैसक्यो। सकिने भएछ भने बिशेष अधिकारको नैतीक बलले sakla. (sorry for typo mistake).
A Real Man and Entrepreneur: A Street Shoemaker
Protest: Gender Responsive Constitution